सुरक्षित से’क्स र च’रम आनन्दका लागि यी ५ क’ण्डम रोज्नुहोस्
क’ण्डम यौ’नजन्य रोगदेखि ए’चआ’ईभी संक्र’मणबाट प्रभावकारी अस्थाई साधन हो। कतिपयले क’ण्डम लगाउँदा यौ’नक्रि’डामा आनन्द आउँदैन भन्ने पनि गर्दछन् तर त्यसो होइन । क’ण्डमको सही छनौट र प्रयोगले तपाईले आफ्नो यौ’न जीवनलाई अझै रोमान्चक बनाउन सक्नुहुन्छ । त्यसैले यसको उपयोगिता सुरक्षाका लागि मात्रै नभएर मनोरञ्जनका लागि पनि हो भन्ने गरिन्छ।
क’ण्डम किन्दा कुन क’ण्डम किन्ने त ?
पसलमा गएर लाज मानेर इशारा गरेर क’ण्डम माग्ने या त्यसका बारेमा जानकारी लिएर मात्रै क’ण्डम किन्ने ? नेपालका जस्ता विकाशशिल देशमा मानिसहरु खुलेर से’क्सका बारेमा खुरा गर्ने अफ्यट्यारो मान्ने भएकाले तपाईलाई कुन चाहि क’ण्डम ठिक हुन्छ भन्ने थाहा नहुन् सक्छ किन भने बजारमा थरिथरिका कण्ड’म पाइन्छन् ।
क’ण्डम अनुसार त्यसको विशेषता समेत फरक फरक रहेका छन्। त्यसैले कण्ड’म किन्नुपूर्व कण्ड’मका बिभिन्न विशेषताहरु बुझ्नु जरुरी रहेको छ । यहाँ बजारमा उपलब्ध हुने बिभिन्न पाँच किसिममा कण्ड’मका बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
१.प्लेजर सेप्ड (आकार) क’ण्डमः
यी किसिमका क’ण्डमहरुको टुप्पो लामो र नरम हुन्छ र से’क्सका दौरानले यसको फरक आकारले थप मज्जा दिन सक्दछ
२. ग्लो इन डार्क क’ण्डमः
यी क’ण्डम प्याकेट बाट खोलेपछि रातमा समेत चम्किन्छन, यी कण्ड’महरुमा तीन तह हुन्छ र से’क्सका लागि अत्यन्ते मज्जेदार मानिन्छ ।
फ्लेवर्ड क’ण्डमहरु चकलेट, कफि, स्ट्रवेरी, मिन्ट, भेनिला जस्ता फ्लेवरमा पाइन्छन। यी कण्ड’महरु ओरल से’क्स अर्थात् मु’ख मैथु’नका लागि लागि उपयुक्त मानिन्छन्। यदि तपाई यसलाइ भेजि’नल से’क्स (यो’नीमा लिं’ग पसालेर) को लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सुगर फ्रि छ कि छैन पक्का गर्नुहोस अन्यथा यिस्ट इंन्फेक्सन हुन सक्दछ ।
४. डटेड कण्ड’मः
प्रायःजसोले डटेट कण्ड’म भन्ने गर्दछन् । अतिरिक्त मज्जाको लागि भनेर यो कण्ड’म प्रयोग गरिन्छ। यसको बाहिरी भागमा डट आकारको साना साना डट हुन्छन जसले से’क्सका दौरान थप घर्षण गराइलाई मज्जालाई दुइ गुना पारिनदिन् सक्दछ । तर यो क’ण्डम किन्दा डटेट छ या छैन यकीन गर्नुपर्दछ ।
५.सुपर थिन क’ण्डम
यी किसिमका क’ण्डमहरु अत्यन्त पातला हुन्छन् र क’ण्डम नलगाएको महसुस गराउँदछन्। कण्ड’मको प्रयोग गर्न नचाहने व्यक्तिहरुलाइ यो क’ण्डम उपयुक्त हुन्छ। पातला नै भएपनि यौ’न रोग र ग’भधारणका हिसावले भने पक्का हुन्छन् ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यदि कमसल गुणस्तरको या डेट एक्सपायर भएको क’ण्डम भयो भने यो च्यातिन या फु’ट्न सक्छ र यसले क’ण्डम जे का लागि लगाउन खोजेको हो, त्यसमा उल्टो असर पर्न सक्छ ।
क’ण्डम किन्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनैपर्छ:
१. क’ण्डम कुन कम्पनीको हो, नाम चलेको र भरपर्दो कम्पनीको होइन भने जतिसुकै राम्रो प्याकेट भएपनि नकिन्नुस्
२. कण्ड’मको म्याद कति छ ? क’ण्डमको बाहिरी खोलमा एक्सपायर हुने मिति पढ्नुस् । म्याद गुज्रेको छ भने नकिन्नुस्
३. क’ण्डम किन्दा पसलमा कुन कुन किसिमको क’ण्डम छ र त्यो कस्तो प्रकारको हो बुझ्नुस्
४. यदि पसलमा क’ण्डमबारे कुरा गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने इन्टरनेटबाट पनि क’ण्डमको ब्राण्डबारे जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ।
५. र, महत्वपूर्ण कुरा, क’ण्डम किनिसकेपछि राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् ।